Ao aminny haiteny ara-piofohana, izay lazanny mpikaroka ao aminy fa mitondra fanitsiana aminny asa nataonny haiteny araka anjara asa malagasy, dia iray aminireo fiendrika telo ny fiendrika anoina, ka ny roa hafa dia ny fiendrika manano sy ny fiendrika ananovana. Voatsinjara aminireo atao hoe fitodika zoina anefa ny hevitra ampitainny fiendrika anoina ka ireto avy izany: Fitodika zoina toerana: Ijanonanny fiara ny eo amoron-dalana. Fitodika zoina fitaovana: Akapoka ny omby ny kibay. Fitodika zoina tolorana: Ivarotako ny fiarako ilay mpanan-karena. Fitodika zoina alalana: Anenjehana lambo ny ...
Atao hoe sokajin-teny ny vondrona misy ireo teny afaka mifanolo hisahana anjara asa mitovy am-pehezanteny ao amin’ny fiteny iray. Mizara ho vondrona roa lehibe ny teny, dia ny reniteny sy ny zanateny. Ny sokajin-teny fahita matetika dia ny anarana, ny matoanteny, ny mpamaritra, ny tambinteny, ny tenim-piontanana, ny mpisolo anarana ary ny mpampitohy. Afaka manana anjara asa hafa tsy araka ny mety mahazatra koa anefa ny teny ao amin’ny sokajy iray, ohatra ny matoanteny dia azo atao lazaina koa ao aminny fiteny malagasy.
Ny endinakoho na tononakoho dia sakafo gasy aminakoho. Ireo akora ilaina: Vainganakoho no lazaina eto: "feny - elany - nofo-tratrany Marihina fa mitovy ihany ny fikarakarana ny akoho na endasina na atono fa ny tena zava-dehibe dia ny ho masaka tsara sy misy hanitra tsara ny akoho. Mila sausy izy io ka ireto ny zavatra ilaina aminizany: Tongolo be oignons voany roa lehibe Vinaigitra roa sotro Siramamy roa sotro kely na tantely iray sotro fihinanana Menaka roa sotro lehibe Tongolo gasy hasiny 10 Sira izay antonona ny tsirairay Dità thym fehezany kely iray vovoka muscade misy mivarotra ao ami ...
Mofo atody: mofo Zavatra ilaina: atody 4, siramamy 8 sotro c.à.soupe, tsongo-tsira 2, farine 1/2kg, lévure 1 sachet pour 1/2kg farine, ronono kely. Kapohina miaraka ny atody, siramamy, sira. Rehefa avy eo de arotsakindry ao ny farine efa nafangaro mialoha taminny levure. arotsakindry zay ny ronono kelikely fotsiny fa manjary matsora lotra ny pate. Endasindry aminy zay, mila menaka betsabetsaka le izy, atao mafana be. Bataina aloha rehefa handrotsaka azy de rehefa tafiditra daholo dia averina fatana. Tandremo sao may a. Dia mazotoa e.
Ny ravitoto dia ravina mangahazo nolaingosana ary nototoina. Marihina fa ny laingony no tena tsara sady tsy mangidy. Aminny fotoana fihavianny orana ka mampitsiry ny mangahazo no tena maha-betsaka azy. Matetika dia andrahoina aminny henan-kisoa na henomby matavy izy, na koa miaraka aminny voanjo, na farafaharatsiny asiana menaka fotsiny. Ahoana ny fahandro ny ravitoto sy henan-kisoa. Alaina ny henakisoa matavitavy tsara; atao mendimendy; avy eo andrahoina elaela kely asiana sira. Andrahoina manokana ny ravitoto ravi mangahazo laingolaingony; lay malefaka tsara iny no totoina eo aminny ora ...
Marihina fa trondron-dranomamy no lazaiko eto Ho anolona 4: Makà trondro maina salasalany 4 na mihoatra, dia alomy kely anaty rano fotoana fohy, dia esory sy ario ny taolataonana. Tangosy ny anamalao 200 g farafaharatsiny ary voniny 3 ihany farafahabetsaka no tazomina. Endaso ny tongolo oignon 1 sy voatabia 1, dia arotsay ao ny trondro maina voakarakara teo, afangaroy tsara dia alefaso ao koa ny anamalao. Afaka 2 minitra dia tampohy rano 1 litatra sy sasany, asio sira araka izay tianao. Saromy ary avelao angotraka 15 minitra, aroaroy matetika, dia arosoy anaty vilia jobo. Tsara aroso miara ...
Fomba fahandro ny vary tena mampiavaka ny malagasy tokoa ny vary aminanana. Ny maraina no matetika fihinanana ny vary aminanana. Ny taharo fototra aminny fanaovana ny vary aminanana dia: ny anana. Afaka manao karazana anana maro isankarazany, fa ny tena fampiasa matetika dia ny anandrano. ny vary kitoza.